१० अर्ब बढी बोनस बाड्दै ४७ कम्पनी, कुन-कुन हुन् ? - Internet Khabar
१० अर्ब बढी बोनस बाड्दै ४७ कम्पनी, कुन-कुन हुन् ?
काठमाडौँ । विभिन्न ४७ कम्पनीले रु १० अर्ब ८१ करोड तीन लाख ४४ हजार बराबरको बोनस शेयर आफ्ना शेयरधनीलाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन्।
आव २०७३÷७४ मा गरेको नाफाका आधारमा ती संस्थाले शेयरधनीलाई बोनस उपलब्ध गराउने घोषणा गर्दै नियमक निकायलाई जानकारी गराएका हुन् । बोनस घोषणा गर्नेमा सबैभन्दा अग्रस्थानमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान कम्पनी लिमिटेड रहेको छ। सो कम्पनीले शेयरधनीलाई ११४ प्रतिशत बोनस दिने घोषणा गरेको छ।
सांग्रिला विकास बैंकले १६ प्रतिशत, भार्गव विकास बैंकले २०, मिशन डेभलपमेन्ट बैंकले ११, वेस्टर्नले १०, काबेलीले २०, एक्सेलले ३० तथा कालिकाले १० प्रतिशत बोनस बाँड्ने घोषणा गरेका छन् । मेगा बैंकसँग एकीकृत भएको टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकले बोनस घोषणा गरे पनि उपलब्ध गराएन।
यस्तै, गुह्येश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सले बोनस उपलब्ध गराउने जानकारी गराए पनि कति प्रतिशत बोनस दिने उल्लेख गरेको छैन। आइसिएफसी फाइनान्सले २० प्रतिशत, सेती फाइनान्सले नौ, मल्टीपर्पोज फाइनान्सले अघिल्लो आवको १२ तथा आव २०७३÷७४ को नाफाबाट १५ प्रतिशत बोनस उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।
मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदको तलब कति ?
वामगठबन्धन र फोरम वार्ता : मन्त्रालय भागबन्डामा अल्झियो सहमति
इटहरी बलात्कार प्रकरण : बालिकाकै आमाको बैंक खातामा भेटियो १८ लाख
अब नेपाल सरकारका सबै सूचनाहरु मोवाईलबाटै हेर्न मिल्ने
फेरि नाकाबन्दीको झल्को देखियो सुनौली नाकामा, मालबाहक ट्रकको लाइन
चुनाव सकिएलगत्तै सरकारले बढायो पेट्रोल र ग्यासको मूल्य
राष्ट्रपतिमा दोहोरिँदै छिन् भण्डारी
माओवादीले मन्त्रीको नाम टुंग्याएका सबै यसकारण छन् सशंकित
कांग्रेस संसदीय दलको नेताः सर्वसम्मत भए शशांक, निर्वाचन भए देउवा
आजको राशिफल – मिति २०७४ फाल्गुन १८ गते प्रतिपदा तिथि शुक्रबार
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ झन शक्तिशाली !
भुटेको लसुन खाँदा शरीरलाई हुने आश्चार्य फाइदाहरु !
सुष्मा स्वराज आज नेपाल आउँदै : विश्वास ब्युँताउने अवसर
मुख्यमन्त्रीको प्रतीक्षामा कुर्सी: मुख्यमन्त्रीका लागि दलीय प्रतिस्पर्धा समाप्त
तपाईलाई थाहा छ, कागती पानी सेवनद्धारा कति फाइदा हुन्छन
न्वारनमा नाम कसरी राखिन्छ ?
यी हुन् स्ट्रोक हुने कारण, लक्षण र उपचार
के हो श्राद्ध ? किन र कसका लागि गर्ने ?
वर्ष २०७३ मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका नीतिगत सुधार उत्साहप्रद
भाइरल बन्दै श्रीदेवीलाई छोरी जाह्रवीले लेखेको चिठी, यस्तो छ चिठी
प्रियंका आज बाट कति वर्ष लागिन् त ?
श्रीदेवीको हत्या गरिएको सुब्रहमण्यम स्वामीको आशंका
श्रीदेवीको मृत्युको कारण झनै रहस्यमय, यी १० प्रश्नले पति बोनी कपुर नै शंकाको घेरामा
किन चलेनन् सलमानका यी फिल्म ?